Stuck at home during COVID-19 pandemic America gets cooking | Culinary Travel News
Ikhaya » izithuba » IiNdaba zokuHamba ngeeNkcubeko » Ukuhlala ekhaya ngexesha lobhubhane we-COVID-19 eMelika uyapheka
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • IiNdaba zokuHamba ngeeNkcubeko • omnye • Abantu benza iindaba • Iindaba zoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziShukumayo • Iindaba ze-USA • Iindaba zewayini
Ukuhlala ekhaya ngexesha lobhubhane we-COVID-19 eMelika uyapheka
Abantu baseMelika bayalela ukuba bahlale ekhaya ngexesha Covid-19 ubhubhane banyanzelwa ukuba bafumane iindlela ezintsha zokufezekisa uxanduva lwabo lwemihla ngemihla kwaye basebenzise ixesha labo elikhululekileyo. Isifundo esitsha esikhutshwe namhlanje sinika umbono wendlela ingxaki ye-coronavirus echaphazela ngayo abathengi abadala baseMelika ukutya kunye nokuziphatha, kunye nokubanakho kwale mikhwa mitsha kukhokelela kutshintsho oluhlala luhleli.
Kolu phononongo, abantu abadala baseMelika abali-1,005 baphononongwa kwi-Intanethi kwaye bacelwa ukuba bathelekise indlela yabo yokupheka kunye nokutya ngoku ngokuchasene ne-COVID-19, kwaye babelane ngeziphumo ezibangelwe kukuzithemba kwabo kokupheka kunye nokonwaba, izithako, ukusetyenziswa kweresiphi, inkunkuma yokutya, kunye nokunye.
Iziphumo eziphezulu zibandakanya:
Ngokupheka kwasekhaya kunye nokubhaka, Ukuzithemba ekhitshini kunye noVuyo ekuphekeni kwe-Soar
Uphononongo luqinisekisa ngokwezibalo ukuba abantu baseMelika bayapheka kwaye bayabhaka ngaphezulu, ngoku ngaphezulu kwesiqingatha sabathengi banika ingxelo yokuba bapheka ngaphezulu (iipesenti ezingama-54), kwaye phantse ukubhaka ngakumbi (46%). Ngelixa ukusetyenziswa kokutya okulungiselelwe ukuthunyelwa ngeposi kunye neekiti zokutya (iipesenti ezingama-22) kunye noku-odola ukuthatha kunye nokuhanjiswa (iipesenti ezingama-30) nako kuyanda phakathi kwabanye abathengi, oku kulungiswa kukuncipha kokuziphatha kwabanye (ama-38% nama-28% ngokwahlukeneyo. ). Iikota ezintathu (75%) zabo bonke abantu abadala baseMelika abapheka ngakumbi banentembelo ngakumbi ekhitshini (50%) okanye bafunda ngakumbi malunga nokupheka kwaye baqala ukwakha ukuzithemba ngakumbi (26%). Ayisiyomsebenzi nje, iipesenti ezingama-73 ziyonwabele ngakumbi (35%) okanye kakhulu njengoko bezenzile ngaphambili (38%).
Abantu baseMelika baMandundu ngakumbi kwaye bayile kwiKhitshi
Uninzi lwabo baphononongweyo bafumanise izinto ezintsha (i-38%) kunye neebranti ezintsha (iipesenti ezingama-45) kwaye bafumana izithako ezingakhange bazisebenzise kudala (24%). Okwangoku, abathengi abathi bapheka rhoqo bayayamkela le mikhwa mitsha nangakumbi ngentumekelelo (44%, 50% kunye nama-28% ngokwahlukeneyo). Ubuchule buninzi, malunga nesinye kwisithathu (34%) sabo bonke abantu abadala abafuna ezinye iiresiphi kunye nokutya kwangaphambili (31%). Iindlela zokupheka eziphezulu abathengi abazifunayo zilula, isisombululo sokutya (61%) kunye neendlela zokusebenzisa izithako ezikhoyo (60%), nangona phantse isiqingatha sabathengi sikwafuna iindlela zokupheka okunempilo (47%) kunye nenkuthazo yokuzama entsha ukutya (45%). Ngaphezulu kwesinye kwisithathu (iipesenti ezingama-35) zabasebenzisi beeresiphi bafuna iprojekthi yokupheka kunye nenkuthazo yokufunda iindlela ezintsha.
Amakhaya amosha ukutya okuncinci ngoncedo oluvela kwiiresiphi eziyilelwe ukusebenzisa izithako ezandleni
Isifundo ifumanise ukuba ama-57% abantu baseMelika bachitha ukutya okuncinci kunangaphambi kwengxaki ye-coronavirus, kunye ne-60% yabo bonke abantu abadala abafumana ingxelo yokuba bafuna iiresiphi zokusebenzisa izithako abanazo kwifriji yabo okanye kwifriji. Kwaye bazifumana phi ezi ndlela zokupheka? Imithombo ephezulu ibandakanya iiwebhusayithi (iipesenti ezingama-66), imidiya yoluntu (58%), kunye nosapho kunye nabahlobo (52%), kunye noFacebook okhokela ipakethi njengeqonga loluntu elithandwayo lokupheka, kubo bonke ngaphandle kukaGen Z.
Ibali leemfono ezimbini zomlenze? Abantu baseMelika bohlulelene ngokutya ukutya okunempilo kunye nokutya ukutya okungakumbi kunye nokutya okuthuthuzelayo
Phantse amanani afanayo amaMelika axela ukuba atya ukutya okusempilweni (iipesenti ezingama-39) njengabo bajikela ngakumbi ekuzonwabiseni nasekutyeni ukutya (40%). Ukusela isiselo esinxilisayo kuhlala kunjalo, nenxalenye elinganayo yabathengi basela iwayini / ibhiya / imimoya engaphezulu (29%) njengokusela kancinci (25%), kwaye uninzi lubambe luzinzile (46%) lusela isixa esifanayo njengoko lwalunjalo ngaphambi ixesha lobunzima lentsholongwane ye-Corona. Abo basela iprofayili engaphezulu ukuya kuma-25-34 (33%) nakumakhaya anengeniso ephezulu (38% kwi-HH kunye nengeniso ye- $ 100K). Okwangoku ukutyiwa okutyiwa imini yonke kuphezulu ngalo lonke ixesha, ngakumbi kumakhaya anabantwana, ngesiqingatha (50%) bachaza ukuba batya kakhulu kunakuqala.
Isiqhelo esitsha: Ukuziqhelanisa nokupheka okuchaphazeleke ixesha elide
Ngokubalulekileyo, phakathi kwabantu baseMelika abapheka ngakumbi, ngaphezulu kwesiqingatha (51%) baxele ukuba baya kuqhubeka nokwenza njalo xa ingxaki ye-coronavirus ifikelela esiphelweni. Abakhuthazi abaphambili baquka: ukupheka ekhaya rhoqo konga imali (58%), ukupheka kuyabanceda ukuba batye besempilweni (52%), ukuzama iiresiphi ezintsha (50%), kwaye bakufumanise ukupheka kuhlaziya (50%).
Iziphumo zophando ziqinisekisa ukuba xa izinto ziba nzima, abantu baseMelika, ekudala bethathelwa ingqalelo njengabanethemba elipheleleyo, bafumana indlela yokuphumelela kwaye kule meko, bakhetha ukuhambisa amandla abo kunye nobuchule ekhitshini, hayi ukufumana ulonwabo kuphela Inkqubo yokupheka, kodwa kunye nezibonelelo ezivela kuyo.